Talk at British Council Library (Daybreak in Myanmar by Geoffrey Hiller) - Myanmar Network
Talk at British Council Library (Daybreak in Myanmar by Geoffrey Hiller)
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on January 8, 2015 at 17:30 in ကြေငြာချက်၊ အကြံပြုချက် နှင့် အကူအညီတောင်းခံခြင်း (Announcement, Comments & Help)
ဗြိတိသျှကောင်စီ စာကြည့်တိုက်တွင် ၂၀၁၅ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက် တနင်္လာနေ့ ညနေ ၅ နာရီတွင် “အာရုံဦးမြန်မာ" (Daybreak in Myanmar) ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Geoffrey Hiller မှ ဟောပြောဆွေးနွေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဟောပြောမည့်နေရာ - ဗြိတိသျှကောင်စီစာကြည့်တိုက် (၇၈၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်)
ဟောပြောမည့်အချိန် - ညနေ ၅ နာရီ
ဟောပြောမည့်နေ့ရက် - ၂၀၁၅ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက် တနင်္လာနေ့
စာရင်းပေးသွင်းရန် - အွန်လိုင်းမှ စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။
Geoffrey Hiller သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၁၉၈၇ ခုနှစ် မှစ၍ အကြိမ်များစွာရောက်ရှိခဲ့ပြီး မြန်မာလူမျိုးတိုို့၏ ဘဝကို မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူးခဲ့ပါသည်။ ၎င်း၏ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများမှ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံ (၁၇၀) အား စုစည်း၍ “Daybreak in Myanmar” အမည်ဖြင့် ၂၀၁၄ စက်တင်ဘာလတွင် ဓာတ်ပုံစာအုပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ Geoffrey Hiller ၏ လက်ရာများကို Geo Newsweek, Mother Jones နှင့် The New York Times မဂ္ဂဇင်းတို့တွင်လည်း ဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရသည်။
Geoffrey Hiller ၏ အကြောင်းကို အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက www.hillerphoto.com တွင်သွားရောက်ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်။
ဟောပြောပွဲကို အသင်းဝင်မဟုတ်သူများလည်း တက်ရောက်နိုင်ပြီး မှတ်ပုံတင်(သို့မဟုတ်) အခြားသက်သေခံကဒ်တစ်ခုခု ယူဆောင်လာရန်လိုအပ်ပါသည်။ စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် အွန်လိုင်းမှ စာရင်းပေးနိုင်ပါသည်။
Geoffrey Hiller’s work has been published in magazines in the USA, Europe, and Japan including Geo, Newsweek, Mother Jones and the New York Times Magazine. His award-winning multimedia projects about Vietnam, Eastern Europe, Ghana, Burma, and Brazil have earned recognition from National Public Radio, The Christian Science Monitor and USA Today. Hiller wasaFulbright Fellow in Dhaka, Bangladesh in 2008–2009. Since then he has worked asamedia trainer in India, Cambodia and Pakistan. Hiller is the creator and editor of Verve Photo: The New Breed of Documentary Photographer. His home is in Portland, Oregon.
Daybreak in Myanmar by Geoffrey Hiller.pdf
Permalink Reply by Nwe Nwe Khaing on January 13, 2015 at 9:46